Maxay dib udhigi karaan goobaha abuurista qiimo u yeelayaan website-kaaga?
Maalmahan, darajada moobiilka ee algorithm waxay noqoneysaa mid aad u adag oo caqli leh. Google wuxuu bixiyaa heerar cusub oo ah "DA" (Domain Authority) iyo "PA" (Page Authority) si aad u bedesho PageRank taas oo ahayd mid qiimo leh. Darajooyinkan cusub ayaa si ballaaran loo isticmaalaa si loo go'aamiyo heerka maamulka maskaxda.
Si loo abuuro tafaftire tayo leh oo awood leh oo awood leh waa riyo ah mulkiilaha bogga iyo bloggers. Dib-u-hagaajinta awoodda sare waxay keeni kartaa qiimo badan qiimahaaga. Marka hore, waxay hagaajin karaan boggaaga SERP. Marka labaad, waxay qaadaan bartilmaameedyada iyo taraafikada gaadiidka si aad u hesho goobtaada iyo saddexaadna waxay kor u qaadi doonaan dakhligaaga ganacsigaaga.
Ma aha hawl fudud oo dib looga soo celiyo goobaha DA. Waxaad u baahan tahay inaad leedahay aqoon iyo xirfad gaar ah si aad u abuurto olole ku dhisan dhisme xiriir ah. Si kastaba ha noqotee, waa inaadan ka tanaasusin xitaa haddii aad dareentid waayo-aragnimo la'aanta khibradahan. Maqaalkani, waxaad ka heli doontaa liiska bogagga sare ee DA oo aqbalaya saxeexyada ka imaanaya isticmaalayaasha cusub waxayna siin doonaan fursad ay ku abuuraan muuqaal cusub. Intaa waxaa dheer, waxaan kula wadaagi doonaa qaar ka mid ah talooyin sida loo abuuro asxaabta dhabta ah ee dib u qaabeynta.
Taariikhda abuurista bogga
Waa inaad bixisaa marqaatiyaal
Haddii aad adeegsanaysid alaab aadna ku qanacsan tahay tayada soo diritaanka markhaati. Marka aad sameysid markhaati, hubso inaad ogaatid in adeeg bixiyaha uu ku dhejin karo boggiisa ama bogga markhaatiga. Xeer ahaan, adeeg bixiyayaashu waxay ku xidhaan xiriirkaaga meel u dhow taariikha si aad u muujiso in aad tahay qof dhab ah. Marka, waxaad ka heli kartaa tayada iyo dib-u-dhaqameedka dabiiciga ah ee markhaatiga.
Raadi isku xirnaanta fursadaha iyada oo loo marayo dib u eegista blogger
Haddii aad u adeegsato alaabta software, tayada tayada ama alaabo kale oo qiimo leh u gee gadaal iyo tayo sare leh. Waxaad ka heli kartaa adoo ku siinaya bloggers ama weydii macaamiishaada inay ka tagaan jawaab celinta.
Raac tilmaamkan si aad ugu hesho dib u eegis tayo leh boggagaaga iyadoo loo marayo dib u eegista bloggers:
Ka hel blogger ah nuugaaga oo hore u soo dhajiyay wax la xiriira ganacsigaaga. Ku dheji sanduuqa raadinta Google su'aal la socota ereyada muhiimka ah ee aad ku talagashay. Natiijo ahaan, mashiinka raadinta ayaa ku siin doona liiska bogagga iyo blogyada kuwaas oo tixraacaya warshadahaaga.
Xayeysiiyaan goobaha waaweyn ee goobaha waaweyn iyo goobo cusub. Ugu dambeyntii, waxaa lagaa tagi doonaa liis adag oo ku qoran bloggers kuwaas oo laga yaabo inay xiiseynayaan dalabkaaga.
U diyaari milkiilayaasha bogagga iyo bloggers adigoo isticmaalaya email ama telefoon. Noqo mid naxariis leh oo aad u taxaddar si aad uga taxaddirtid luqadda aad isticmaashid. Waxay noqon kartaa si laguu weydiiyo lacag bixinta ama xaalado kale oo faa'iido leh.
Isku xirnaanta xiriirka
goobtaada. Waxaad u baahan tahay inaad ka heshid qoraal ku saabsan website-kaaga halkaasoo cinwaankaaga aan laguu sheegin. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad la xiriirto qoraaga buugan oo weydii isaga ama iyada inay ku daraan xiriirkaaga. Dib-u-qabadka noocan oo kale ah ayaa u adeega sida codadkaaga oo kor u qaadaya awooddaada internetka ee indhaha Google Source .